Ukwakhiwa kwegesi okwandisa kwenzeka kubantu abaningi. Abanye bathola izimpawu zesikhashana, abanye banenkinga enomphela noma ende. Kodwa kulokho, futhi kwezinye izimo, awukwazi ukwenza ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa ezikhethekile ezinciphisa igesi nokubunjwa kwe-flatulence.
Imithi Espumizan iyingxenye yeqembu lezidakamizwa ze-carminative. Imfundo "i-Espumizana" ichaza njengendlela yokunciphisa ukukhiqizwa kwegesi kanye ne-foam ku-digestive tract.
Naphezu kokuthi izidakamizwa "i-Espumizan" zithengiswa kuma-pharmacy ngaphandle kwemithi, kuyadingeka ukuthi uthintane nodokotela ngaphambi kokusetshenziswa. Isibonakaliso ngenhloso yalolu remedy singafaka izimpawu nezifo ezilandelayo:
I-flatulence (ukuvuvukala, okuvela ngezizathu ezihlukahlukene, isibonelo, ngenxa yokudla ukudla, okwenza ukwakhiwa kwegesi okwandisiwe, noma esikhathini esilandelayo, ngokumelene nesimo sokuthatha ama-antibiotics, njll);
Ucwaningo lwe-preoperative noma lwe-diagnostic lapho i-bubbles gesi evimbela khona isithombe esinembile futhi sithole ukuthi kunzima ukuxilongwa;
I-Aerophagia (ukungenisa umoya owedlulele nokuqhuma);
I-Dyspepsia (igama elivamile ngezinkinga eziningana ezibangelwa ukungasebenzi kwamathumbu emathunjini, izimo ezifakwe emgodini, ukuvutshelwa, ukugcoba, ukuqubuka kwesisu, isisindo, isisindo esiswini);
I-Remkheld's syndrome (eyinkimbinkimbi yezinguquko zenhliziyo ezivela ngenxa yokuphakama kwesimiso esinesisu esigcwele);
Ubuthi nge-detergents (i-Espumizan i-defoamer ephumelelayo);
Isidingo sokuthola isithombe sokuqhathanisa kabili ku-endoscopy (kulokhu, lesi sidakamizwa ngesimo sokumiswa kuyisithasiselo kumaphakathi wokuphambene).
Isidakamizwa i-Espumizan sihluke emajenti wemvelo, okubandakanya i-fennel, i-dill kanye ne-parsley decoctions. Amakhambi omphakathi enza ngendlela yokunciphisa ukugxila emathunjini emathumbu, ngenxa yalokho umsebenzi wayo wanda, futhi amagesi asuswa ngokwemvelo.
Isimiso sokulungiselela i-Espumizan sihlukile. Lokhu, njengamakhemikhali emvelo, kuncipha ukugxila emathunjini kancane, kodwa ngesikhathi esifanayo kuthatha njengesiqhwaga. Okusho ukuthi, izidakamizwa zibhubhisa imvilophu ye-bubbles bubbles, ngenxa yokuthi ihlangene futhi ixhunyiwe kancane, futhi ingxenye ingaphandle ngokwemvelo. Elinye ithuluzi lenza ifilimu ezindongeni zamathumbu, okuwukuvimbela ukubola okungapheli.
Isidakamizwa u-Espumizan asiyona into enobuthi futhi sidonswa emzimbeni ngendlela engashintshi.
Amafomu omuthi wokulungiselela "Espumizan"
Imithi iyatholakala ngezindlela ezimbili: ama-capsules nama-emulsions wokusetshenziswa kwangaphakathi. Ku-capsule eyodwa iqukethe 40 mg wezinto eziyinhloko zokwelapha - isimiso samanje. Njengoba izinto ezisizayo ekubunjweni zihlanganisa i-methyl-4-hydroxybenzoate, i-glycerin nama-dyes amabili - E104 no-E110. Ama-capsules ahlanzekile aphuzi aphethwe amabhulashi angu-25 ama-pcs., Ama-Blisters afakwa ebhokisini lekhadibhodi - 1, 2 noma 4 ama-pcs.
Emulsion (isiraphu) "I-Espumizan" iqukethe 40 mg we-simethicone kuwo wonke ama-5 ml. Ukwakhiwa kwezidakamizwa kuhlanganisa izinto eziningana ezisizayo, kufaka phakathi ukunambitheka kwebhanana, njengoba leli fomu lenzelwe izingane. Isidakamizwa sithengiswa emabhodleleni amabhodlela amnyama, asebhokisini lekhadibhodi. Ibhokisi lenzelwe ibhodlela elilodwa nge-100 ml ye-emulsion. Isiraphu ibukeka njengeketshezi elingenambala noma elingenambala (elincane) elimhlophe.
Ukulungiselela "Espumizan": imiyalelo yokusetshenziswa (amaphilisi)
Isidakamizwa kufanele sithathwe ngomlomo, ngesikhathi noma emva kokudla. Uma kunesidingo, ungathatha isidakamizwa ebusuku. Amathebulethi angasetshenziswa kusukela eneminyaka eyisithupha, lokhu kubangelwa ubunzima bokugwinya. Umyalo "u-Espumizana" uqukethe ulwazi mayelana nemingcele yomuthi:
Amaphilisi amabili kubantu abadala;
1-2 izingane ezineminyaka engama-6 kuya kwengu-14.
Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa okulodwa kwesidakamizwa kukwanele ukuqeda ukuqhuma kanye nezimo ze-flatulence. Nokho, uma kunesidingo, ithebhulethi ingasetshenziswa isikhathi eside, imvamisa yokwamukela izikhathi ezingu-3-5 ngosuku.
Ukulungiselela "Espumizan" (isiraphu): imiyalelo yokusetshenziswa
Ukulungiswa ngendlela ye-emulsion isetshenziswa kakhulu kakhulu. Kunqunyelwe abantu abadala (80 mg noma amathisipuni amabili ngesikhathi), izingane (1-2 scoops) nezinsana (1 ithisipuni) ene-flatulence, bloating, colic nangaphambi kwe-rayography ne-ultrasound. Izingane ezisuka ngonyaka wokuqala wokuphila futhi ezineminyaka engama-6 ubudala, lesi sidakamizwa sinqunywe kuphela ngesimo se-emulsion.
Ukuze uthole izifundo lapho kudingeka khona ukuthola isithombe esiphambene kabili, ku-1 litre yokuphambene wengeze u-20-40 ml we-Espumizan. Ezimweni zobuthi nge-detergents, lesi sidakamizwa senziwa ngomlomo ngama-50-100 ml kumuntu omdala kanye no-10-50 ml kwengane. Izinga eliqondile lixhomeke ekuqotheni kwe-poisoning.
I-emulsion kumele ithathwe ngemuva noma ngokushesha ngesikhathi sokudla. Abantwana besibhedlela bangathola lesi sidakamizwa ngokushesha ngokudla: kusuka ebhodleleni enenhlanganisela noma ngesiphuzo.
Ukufundiswa kuka-Espumizan kuchaza ukuthi lesi sidakamizwa siphephile ngokuphelele, ngaphandle kwamacala okungahambisani nomuntu ngamakhemikhali, ukubonakala komzimba nomzimba wokuvimbela emathunjini.
Amacala okudlulela kwezidakamizwa awagcini. Ungasebenzisi le mithi ngokuhambisana neminye imithi. Kodwa hhayi ngoba inhlanganisela enjalo ingathinta umzimba womuntu. Ukuvimbela ukumiswa kwezinye izidakamizwa, futhi ukusetshenziswa kwabo akusebenzi. Emva kokuthatha i-Espomizan, kufanele kuthathe okungenani amahora angu-3-4 ngaphambi kokuthatha ezinye imithi.
Akunconywa ukuba uthathe isidakamizwa ngesikhathi esifanayo nezidakamizwa ezinciphisa i-asidi esiswini (izidakamizwa "i-Almagel", "Maalox", "Gastal", njll).
Ukusetshenziswa kuka-Espumizane ngesikhathi sokukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane abaningi bahlushwa ngokweqile kwegesi. Ngisho noma kungeke kube khona izinkinga ezifanayo ngaphambili, ukwanda kwe-flatulence nokuvuvukala kungabonakala ngenxa yezinguquko emzimbeni (izinguquko ekudleni, ukufuduka kwezitho zangaphakathi ngenxa yokukhuliswa kwesibeletho, njll). Ngakho-ke, ngesikhathi sokukhulelwa, kunesidingo sokuthatha imithi ngokuphumelelayo, kodwa ngokuphepha, kunciphisa ukukhiqizwa kwegesi okwandisiwe. Futhi njengendlela yokwelapha, i-Espumizan ingasetshenziswa kahle. Ayitholakali yindlela yokugaya futhi igxiliwe ngokuphelele ngomzimba ngendlela engashintshi. Kodwa-ke, kufanele kucatshangelwe ukuthi lesi sidakamizwa singabangela ukusabela kokugula, ngakho-ke kudingeka ufunde ngokucophelela ukwakheka. Ngokuvamile abakhulelwe banquma umuthi "u-Espumizan" ngesimo se-emulsion. Lokhu kungenxa yokuthi ama-capsules aqukethe ama-dyes, okuyinto kwabanye abantu abanezifo eziqinile. Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo, udinga ukubonisana nodokotela obona ukukhulelwa.
Kungenzeka yini ukunika u-Espumizan usana olusanda kuzalwa?
Izinsana zivame ukuzizwa zingakhululekile emathunjini, ukubhuqa kanye ne-colic. Ingane iqala ukukhala, imemeza, imilenze ye-jerk. Ukuvela kwalezi zinkinga kuhlotshaniswa neqiniso lokuthi isisu somntwana usanda kuqalisa ukusebenza futhi okwenza okwesikhashana ukubhekana kahle nemisebenzi yaso. Njengesizo kumntwana osanda kuzalwa nge-bloating kanye ne-colic, odokotela batusa ukwenza massage ekukhanyeni esifundeni se-peripump, futhi nokubeka umntwana esiswini.
Uma lezi zindlela zingasebenzi, udokotela angakwazi ukumisela u-Espumizan, ngokuthobeka, ngokukhululeka nangokuphumelelayo ukukhulula ingane yengqondo engathandeki.
Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi le mithi ingumuthi, ngakho ungayinikezi ingane yakho ngaphandle kokubonisana nodokotela noma wena njengeprophylactic isikhathi eside.
Ukusetshenziswa kuka-Espumizan ekufundeni ukuxilongwa
Ngesikhathi i-radiography, i-endoscopy kanye ne-ultrasound yesigxobo esiswini, amagesi e-gas aphazamisa ukubonakala kwendawo ephethwe uphenyo, okuholela ekubuneni ekwenzeni ukuxilongwa.
Uma usebenzisa i-Espumizan, umphumela phakathi nezifundo unokwethenjelwa kakhulu, ngoba i-emulsion iqinisekisa ukusabalalisa okuqhubekayo kwe-fluid ehlukile phakathi kwe-mucosa yesisu ngaphandle kwamaphule okubangelwa ukushiswa kwegesi ngokweqile.
Imfundo "i-Espumizana" iqukethe ulwazi oluningiliziwe mayelana nemithi yesidakamizwa kubantu abadala kanye nezingane ezinezivivinyo zangaphambi kokuhlola nokuhlola, kodwa kunoma yikuphi okudingekayo ukwazi imibono kadokotela. Kuye ngezici eziningana, angakhuphula noma anciphise umthamo noma ashiye ngokuphelele ukuqokwa kwakhe esigulini.
Isidakamizwa i-Espumizan ingenye yezidakamizwa eziphumelela kakhulu ezihloswe ekuqedeni izimo ze-flatulence. Lokhu kuboniswa hhayi kuphela izimpendulo eziningi ezinhle zeziguli, kodwa futhi nobufakazi bezochwepheshe abanekhono.
I-polycystic ovary. I-Homeopathy.
Endaweni Lounge. Ukwakhiwa ukuzilibazisa izindawo
Nezibiliboco Sicindezelwe kanye champagne - ukuze baphile cha enqabela amahle ...
Umhlanga weReed: indawo yokuhlala, incazelo, isithombe